News | Photo Announcement | Myanmar Exhibition and Conference Association
မြန်မာနိုင်ငံကုန်စည်ပြပွဲ၊ အခမ်းအနား နှင့်ဆွေးနွေးပွဲများဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအသင်း (MEECA) ၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အသင်းသားစုံညီ အစည်းအဝေးကို ယနေ့ (၂၀-၂-၂၂) ရက်နေ့တွင် အွန်လိုင်းဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ အသင်းအမှုဆောင်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများနှင့် အသင်းသားများမှ စုံစုံညီညီ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
မိမိတို့စီးပွါးရေးနယ်ပါယ်သည် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြောင့် ယိုင်လဲစပြုနေသော်လည်း အသင်းသားများမှ အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ ကြိုးစားဦးဆောင်ဆောင်ရွက်မှုအောက်တွင်ကြံ့ကြံ့ခံ၍ မိမိတို့စီးပွါးရေးနယ်ပါယ် ပြန်လည် ဦးမော့လာစေရေးအတွက် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် တညီတညွတ်တည်း ဆုံးဖြတ်အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။
The Fourth Annual General Meeting of MEECA Myanmar, Event Exhibition and Convention Association was held online today (20-2-22). The meeting was attended by the Executive Committee Members and the Members of the Association.
Although the Event, Exhibition and Convention business community is in the throes ofaglobal epidemic, the members are united in their commitment to work together to revitalize their business community under the leadership of the Executive Committee and the Association.
(14th March 2020)
2019 Member Gathering Party
AFECA Annual Meeting in Manila
Group Photo with Philipine Exhibition Association
State Councellor visit to MECA booth at UMFCCI Centenial
TCEB Roadshow in YGN
With TCEB Vice President at Ufi Meeting in BKK